> Resource > iPad > Sidee soo celinta iPad Mini ka kaabta iPad / iPhone / Lugood
Ma suurogalbaa in la soo celiyo mini iPad kaga imaanayo iPad?
Iyadoo ah ee qalabka cusub ee Apple, in badan oo taageerayaasha Apple qaban in ka badan hal ama laba qalabka macruufka in ay gacanta. Markii ay ku raaxaystaan ​​qalabka cusub, waxaa sidoo kale waa arrin kale oo iyaga ku hareeraysan, sida ay u soo celin kartaa qalabka la hayaan kala duwan? Tusaale ahaan, waxaa suurtagal ah in la soo celiyo mini iPad kaga imaanayo iPad, sida iPad 2? Ama ka iPhone ama Lugood gurmad soo celin iPad mini?
Jawaabtu waa HAA. Dhab ahaantii si toos ah aad u soo celin kartaa iPad mini ka iPad gurmad la Lugood. Just samee sida aad ka gurmad u gaar ah oo ku saabsan Lugood soo celinayo iPad mini. Waxanu wuxuu ka mid waxaad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in dib u samayn xog muhiim ah oo ku saabsan iPad mini ka hor inta aadan soo celin, waayo, xogta hadda waa inay gebi ahaanba tirtirayaa iyo bedelay. Haddii aad dooneyso inaad ogaato content gurmad ugu horeysay, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows), oo ha waxaad ka akhrisan kartaa oo dhan ku jira gurmad ka hor soo celiyo, oo ay ku jiraan hayaan ee iPad , iPhone iyo iPod taabto.
Fiiro gaar ah: Si aad u aragto in aad gurmad file, aad kor ku soo bixi kartaa barnaamij kasta, u ah dhamaan ogolaado in aad ka akhrisan files raad raac ah oo iPad, iPod iPhone iyo taabashada.
Hadda, bal aynu hubiyo sida aad wax ka akhrisan kartaa nuxurka gurmad ka hor inta aadan ka gurmad iPhone / iPad / Lugood soo celin iPad mini. Isticmaal version Windows u leedahay in isku day ah. The version Mac si dhab ah u shaqeeyo si la mid ah.
Step1. Orod barnaamijka iyo dooran gurmad ah
Ka dib markii socda barnaamijka, dooro ka soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda, oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose. Halkan oo dhan files gurmad kombiyuutarka waxaa si toos ah helay. Dooro mid aad rabto in aad ku eegaan oo guji Start Scan si ay u soo saaro.
Step2. Waraaqda gurmad ah u helaan
Ka dib markii faylka gurmad waxaa bixiyay, waxaad heli doontaa warbixin soo socda. Dhab ahaantii, waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran waqtiga sawirka. Dhinaca bidix, waxaad dooran kartaa qeybta kasta oo si ku eegaan faahfaahinta ku saabsan xaq. Markaasuu iyaga doortaan oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Hadda waxaad ka akhrisan kartaa files gurmad on your computer. Waxa kale oo xiriir ah la badbaadin karaa on your computer saddex qaabab kala duwan, HTML, VCF iyo CSV. Sida waxyaabaha ku jira qoraalka kale, waxaad iyaga ku badbaadin karaan sida HTML files, oo waa ku weyn yahay, waayo, akhriska iyo daabacaadda. Ka dib markii in, waxaad go'aansan kartaa haddii aad doonaysid in aad soo celinayo iPad mini ka raad raac ah oo iPad, iPod iPhone ama taabashada.